Podcasting သည်လူကြိုက်များမှုနှင့်ငွေကြေးအမြောက်အမြားတွင်ဆက်လက်တိုးပွားလျက်ရှိသည် Martech Zone
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, စက်တင်ဘာလ 12, 2018 စနေနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 13, 2021 Douglas Karr
ငါတို့4ကျော်ဖြစ်စဉ်များအကြောင်းကို 200 သန်း downloads ကိုရရှိပါသည် စျေးကွက်ရှာဖွေရေး Podcast တခုကို ယနေ့အထိ, ဒါကကြီးထွားနေဆဲဖြစ်သည်။ ငါတို့အများကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်အောင်အများကြီး podcast စတူဒီယို။ ငါ၏ဒီဇိုင်းကိုအဆင့်အတွက်အမှန်တကယ်ပေါ့ အသစ် ကိုယ့်ကိုယ်ကို podcasts တွေအများကြီးပါ ၀ င်နေတယ်၊ ​​လည်ပတ်နေတယ်ဆိုတာငါသိပြီးကတည်းကငါ့အိမ်ကိုပြောင်းသွားလိမ့်မယ်။
2003 ခုနှစ်တွင်ယင်း၏နှိမ့်ချစ မှစ. , podcasts ရပ်တန်၏လက္ခဏာမ content တွေကိုစျေးကွက်နှင့်ရှိုးပွဲတစ်ခုကိုလညျးမတားဆီးအင်အားစုဖြစ်လာသည် - တက်ကြွစွာ podcasts တွေကို၏နံပါတ် 2008 ကတည်းကတဟုန်ထိုးမြင့်တက်သွားသည်သိရသည်။ Jon Nastor
2018 Podcasts တွေကိုစာရင်းအင်း
Podcast နားထောင်သူများသည်တစ်ပတ်လျှင်ပျမ်းမျှပွဲ ၇ ခုကိုနားထောင်သည်၊ ၂၀၁၇ မှ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းတက်သည်
အွန်လိုင်း ၁၀၀ ကျော်မှာတက်ကြွတဲ့ Podcasts ပေါင်း ၅၅၀,၀၀၀ ရှိတယ်၊ အွန်လိုင်းမှာဖြစ်စဉ်တွေ ၁၈.၅ သန်းရှိတယ်
podcasting တင်ခြင်း၏ထိပ်တန်းအမျိုးအစား ၅ ခုမှာလူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်ယဉ်ကျေးမှု၊ စီးပွားရေး၊ ဟာသ၊ သတင်းနှင့်နိုင်ငံရေးနှင့်ကျန်းမာရေးတို့ဖြစ်သည်
အမေရိကန်လူဦးရေရဲ့ 64% ဆိုတဲ့ဝေါဟာရကိုအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်ပါတယ် podcasting
အမေရိကန်လူ ဦး ရေ၏ ၄၄% သည် Podcast တခုကိုနားထောင်ကြသည်။ ၂၆% သည်လစဉ်လစဉ် Podcasts များကိုနားထောင်ကြသည်၊ အပတ်စဉ် ၁၇%၊
Podcasts များအတွက်လူ ဦး ရေအချိုးအစားမှာအသက် ၂၅-၃၄ နှစ်ဖြစ်ပြီး၊
Podcast ကိုနားထောင်သူများသည်ကောလိပ်ဒီဂရီရရှိရန် ၄၅% ပိုများသည်။ ၃၇% သည်နှစ်စဉ်ဝင်ငွေဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀၀ နှင့်အထက်ဖြစ်နိုင်သည်။
နှစ်အနည်းငယ် Reverse နှင့် စားသုံး podcasts တွေကိုရှုပ်ထွေးတဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ သင့်မှာ iOS device ရှိရင်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သော podcasts တွေကိုရယူပြီးတဲ့အခါသင့် Device ကို iTunes နှင့် sync လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ သို့သော်လည်းထုတ်ကုန်များသည်အဆင့်မြင့်လာသည်နှင့်အမျှဘရော့ဘန်းဆက်သွယ်မှုများသည်သာမန်ကိစ္စဖြစ်လာသည်။ streaming များ podcasts တွေကိုပုံမှန်ဖြစ်လာသည်။ Apple မှာရှိတယ် ပေါ့တ်ကာစ်အက်ပ်နှင့်လည်းရှိပါတယ် Stitcher, TuneIn, BlogTalkRadioနှင့်လက်ကိုင်ဖုန်းအက်ပလီကေးရှင်းများသည်ကစားသမားများကိုအလွယ်တကူပေါင်းစည်းနိုင်သည်။
သင်၏နံနက်ခင်းပြေးထွက်စဉ်သို့မဟုတ်မွန်းလွဲပိုင်းစက်ဘီးစီးနေစဉ်နားထောင်ခြင်းအပြင်စမတ်ဖုန်းနှင့်မော်တော်ယာဉ်များကိုချောမွေ့စွာပေါင်းစည်းခြင်းကသင်၏နံနက်ခင်းနှင့်နေ့လည်ခင်းနေရာများတွင်အသံလွှင့်ရုံကိုနားထောင်ခြင်းဖြစ်စေသည်။ ကျနော့်အမြင်အရဒီကစီးပွားရေး podcasts များဖြင့်တိုးတက်မှုအရှိဆုံးဒေသဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်သည်။
စားသုံးမှုပြောင်းလဲခြင်းသာမကအပြုအမူကလည်းပြောင်းလဲနေသည်။ လူတွေဟာ Netflix ကိုနာရီပေါင်းများစွာကြည့်ပြီးစောင့်ကြည့်ကြသလိုကျွန်ုပ်တို့နားထောင်သူများသည် podcast ၏နာရီတစ်ခုတည်းထိုင်ခုံတွင်နားထောင်မည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ podcasts တွေကိုလောင်ကျွမ်းနိုင်သော 2016 ကားများတွင် audio interfaces စံအသစ်နှင့်ဤအရာကိုပေါင်းစပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့တစ်ခါမှမမြင်ဖူးသကဲ့သို့ On-demand အသံသည်ပျောက်သွားတော့မည်ဖြစ်သည်။
ထိုတွင် ထုတ်လုပ်မှု podcasting လုပ်ခြင်းဟာပိုပြီးလွယ်ကူလာတယ်။ အသံသွင်းထားတဲ့စတူဒီယိုတစ်ခု၊ စျေးကြီးတဲ့မိုက်ကရိုဖုန်းတွေနဲ့အသံသွင်းဖို့အတွက်ရောနှောပေါင်းစပ်စရာတွေလိုတယ်။ ထို့နောက်အသံတည်းဖြတ်သူထံအသံညှိရန်နှင့်ညှိရန်။ ငါမကြာသေးမီကတစ် ဦး နှင့်အတူလမ်းပေါ်မှာ Podcast တခုကိုကိုပြု၏ ချဲ့ကြည့်ပါ H6 အသံဖမ်း နှင့်အစုတခု Shure SM58 မိုက်ခရိုဖုန်း - နှင့် Podcast တခုကို၏ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာမယုံနိုင်စရာရှိကြ၏။ Heck, သင်နှင့်အတူစတင်နိုင်ပါသည် Podcast appနှင့် Bluetooth နားကြပ်တစ်ခုကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။
မီဒီယာသုံးစွဲမှုသည်နည်းပညာနှင့်ပါရာဒိုင်းအသစ်များကြောင့်သိသိသာသာပြောင်းလဲသွားသည်ကိုပြနေသည်။ Mobile ၏ 'ပထမဦးဆုံးမျက်နှာပြင်' 'အဖြစ် utility ကိုတိုးမြှင့်အဖြစ်ကောင်းစွာကဲ့သို့သော podcasts တွေကိုနှင့် On-demand ကိုဗီဒီယိုန်ဆောင်မှုအနေဖြင့်' 'bingeable' 'အကြောင်းအရာအဖြစ်အစားထိုးအကြောင်းအရာပုံစံများ၏မြင့်တက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကို span တိုတောင်းသောဒဏ္ဍာရီ subverting ဖြစ်ပါတယ်။ အက်ဒီဆင်၏မဟာဗျူဟာဒုဥက္ကPresident္ဌ Tom Webster
နှစ်ပေါင်းများစွာ podcasting လွှင့်ခဲ့ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည်စပွန်ဆာအချို့မှတစ်ဆင့်လျောက်ပတ်သော ၀ င်ငွေရရှိသည် (ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ) ကြော်ငြာ) ။ ကျွန်ုပ်၏ podcasts များသည်လာမည့်လအနည်းငယ်အတွင်း 10k + နားထောင်နိုင်ဖွယ်ရှိသောကြောင့်ကြော်ငြာရှင်များသည်ဇာတ်လမ်းတွဲအတွက်ဒေါ်လာရာပေါင်းများစွာပေးဆောင်နေကြရသည်။ ၎င်းသည်အသံနှင့်မတူနိုင်သော်လည်း Podcasts များကိုအချိန်ဇယားဆွဲခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်ထုတ်ဝေခြင်းတို့အတွက်အကျိုးရှိသည်။ စာသားနဲ့ဗွီဒီယိုတွေနဲ့မတူတာက podcasting ဟာကြော်ငြာဖို့ကောင်းတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မင်းကနားထောင်သူရဲ့အာရုံစိုက်မှုကိုခံရတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်၏ကြော်ငြာသူများသည်ကျွန်ုပ်၏နားထောင်သူများအတွက်လည်းသက်ဆိုင်ပြီးတန်ဖိုးရှိကြောင်းသေချာအောင်လုပ်ပါတယ်။ အဲဒါသော့ချက်လို့ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကိုမွေ့ယာတွေရောင်းဖို့ကြိုးစားနေတာကိုမင်းကြားမှာမဟုတ်ဘူး စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအင်တာဗျူးများ!
သင်၏လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင်ရေပန်းစားသော Podcasts များမရှိလျှင်ဤအချိန်သည်စတင်ရန်အချိန်ဖြစ်သည်။ အားလုံးဒီကနေတက်ပါတယ်။
Tags: 2018အက်ဒီဆင်သုတေသနIABစျေးကွက်ရှာဖွေရေး PodcastတေးရေးNielsenပစိဖိတ်အကြောင်းအရာpodcast အမျိုးအစားများpodcast တခုကိုစားသုံးမှုpodcast တိုးတက်မှုနှုန်းpodcast စာရင်းဇယားpodcast စာရင်းဇယားများpodcast စတူဒီယိုpodcastingတိုးတက်မှုနှုန်း podcastingစာရင်းအင်း podcastingpwc